ဗိုက်ပေါ်ကအကြောပြတ်ပြတ်နေတဲ့အကွက်တွေကိုဘယ်လိုဖျောက်ကြမလဲ | Buzzy
အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးများမှာသားဒီလိုအကြောပြတ်တာမျိုး အများဆုံးတွေ့ဖူးတာပါ။ ပိုဆိုးတာကတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ သားဖွားပြီးအမျိုးသမီးတွေ အ၀လွန်တဲ့သူတွေ မှာ အများဆုံးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေထဲမဟုတ်လည်း အကြောပြတ်တတ်ကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဆိုတော့မုန်းစရာအကြောပြတ်အ
ရေများများသောက်ပေးခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းပဲကျန်းမာစေတာမဟုတ်ပဲ ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ပိုင်းအရေပြားကျန်းမာရေးကိုပါအထောက်ကူပြုစေတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ ရေဓာတ်များများရှိတဲ့အသားရည်ဟာ အစက်အပြောက်ကင်းစင်စေပြီး အခုလို အသားရေခြောက်ကပ်ခြင်းနဲ့ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အသားပတ်ခြင်း အကြောပြတ်ခြင်းတွေကိုထိရောက်စွာသက်သာစေပါတယ်။
ဘယ်လို အနာတွေ အရာတွေ မျိုးမဆိုအရေပြားပေါ်မှာရှိတဲ့ မလိုအပ်တဲ့ ရောဂါတွေရဲ့ငယ်နိုင်တစ်ခုကတော့ရှားစောင်းလက်ပတ်ပါပဲ။သူ့မှာပါတဲ့Anti-oxidants ဟာ အရေပြားပေါ်မှာရှိတဲ့ Cells တွေ Tissue တွေကိုအသစ်ပြန်လည်ပေါက်ဖွားပေးတတ်တာကြောင့် ရှားစောင်းလက်ပတ်ကိုအကြောပြတ်တဲ့ နေရပေါ်ကို လိမ်းလိမ်းပေးခြင်းဖြင့် အကြာခင် အကြောပြတ်အရာတွေ သိသာစွာသက်သာစေမှာပါ။
အုန်းဆီဟာ အကြောပြတ်ခြင်းရောဂါအတွက် အကောင်းဆုံးဆေးတစ်မျိုးပါပဲ။ အုန်းဆီမှာပါဝင်တဲ့ Lauric Acid ကပျက်စီးနေတဲ့အသားရည်တွေကိုထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိတွေပါဝင်ပါတယ်။ အကြောပြတ်နေတဲ့နေရာကိုအုန်းဆီပုံမှန်လိမ်းပေးခြင်းဟာလည်း အကြောပြတ်ခြင်းကိုလျင်မြန်စွာသက်သာစေတဲ့နည်းတစ်နည်းပါပဲ။
4. ကြက်ဥအကာနဲ့Treatment ကိုတစ်လနှစ်ကြိမ်လောက်လုပ်ပါ
ပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ ကြက်ဥရဲ့အကာကို အကြောပြတ်တဲ့နေရာသို့တစ်လနှစ်ကြိမ်လောက်လိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။ တစ်လနှစ်ခါလောက်လိမ်းပေးတာလေးလောက်နဲ့တောင် အသားရေကိုပျော့ပြောင်းစေပြီး အမာရွတ်တွေကင်းဝေးစေပါတယ်။
5. သကြားနဲ့Treatment လုပ်ပါ
သကြားကို အရေပြားပေါ်ကိုပွတ်တိုက်လိမ်းပေးခြင်းဟာ အရေပြားပေါ်ကသေဆုံးနေတဲ့ Cell အဟောင်းတွေကိုကွာကျစေပါတယ်။ Cell အသစ်တွေကို ပြန်လည်ရှင်သန်စေတာကြောင့်သူ့နဲ့Treatment လုပ်ရင်လည်း အကြောပြတ်ခြင်းကိုသက်သာစေပါတယ်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီး လအနည်းငယ်ကြာသည်အထိပိုက်ဆံစုကာ Iphone 8 plus ဝယ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
မိန်းမပုံ ပြောင်းChallenge accepted လိုက်တဲ့အိစိ ကွေး
နေ့ခင်းကြောင်တောင် သစ်ပင်နဲ့ မဖွယ်မရာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
အမျိုးသားအဂါင်္ကြီးဆေး သောက်ပြီး ဆက်ဆံမိလို့ အမျိုးသမီးဖြစ်သူ သေဆုံး
တက်တူးထိုးဖို့ ပုံရွေးရခက်နေသူတွေ အကြိုက်တွေ့စေမဲ့ ဟယ်ရီပေါ်တာ ဇာတ်လမ်းထဲက တတ်တူးဒီဇိုင်များ
နန်းတွင်းဇာတ်လမ်းတွဲကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် "The Emperor:Owner of the Mask" ဇာတ်လမ်းကောင်းလေး
“Reflection - ရောင်ပြန်” ကားကြီးမှ ပတ်ထရစ်ရှာ ရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေ